Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Adeegyada Caafimaadka > Maaraynta Caafimaadka
Taageerida xiriirka ka dhexeeya adiga iyo bixiyeyaashaada.
Maareynta xaaladahaaga dabadheeraad ah ayaa qayb muhiim ah ka ah joogitaanka caafimaadka iyo Kooxdayada Adeegyada Caafimaadka ayaa kaa caawineysa inaad ku sii socoto wadada. Markaad raadiso adeegyada caafimaadka, Adeegyada Caafimaadka waxay eegaan khatarahaaga caafimaad, baahiyahaaga, iyo yoolalkaaga ka dibna waxay dejinayaan qorshe hawleed si gaar ah adiga loogu talagalay. Barnaamijyadeenna Adeegyada Caafimaadka waxay taageeraan xiriirka ka dhexeeya adiga iyo bixiyeyaashaada, waxayna la socdaan sida ugu wanaagsan ee qorshaha daryeelku u shaqeynayo iyadoo la adeegsanayo tilmaamo caafimaad iyo caddeyn ku saleysan.
Barnaamijyada Maamulka Caafimaadka
Maareynta Kiisku wuxuu u doodaa xubinta wuxuuna ka caawiyaa isku dubaridka daryeelka u dhexeeya dhowr bixiyeyaal kala duwan. Waxay sidoo kale hubiyaan inay xubnuhu heli karaan ilo kale oo ay heli karaan.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Maareynta Kiiska.
Tababbarka caafimaadka ayaa loo heli karaa xubnaha laga helay cudurka neefta, COPD, sonkorowga, ama wadnaha oo istaaga.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Tababbarka Caafimaadka.
Maareynta Ka-faa'iideysiga waa nidaam dib-u-eegis oo hubiya inaad heshid daryeel habboon.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Maareynta Ka-faa'iideysiga
Dib-u-eegista Bukaanka iyo Isku-duwidda Bukaanku waxay gacan ka geysaneysaa hubinta in adeegyada si ammaan ah loo isticmaalo.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijka Dib-u-eegista iyo Isku-dubbaridka Bukaanka (PRC).
Hubinta Sii wadida Daryeelka
Waa muhiim inaad ilaaliso heerkaaga guud ee caafimaadka iyo daryeelka. Haddii aad la kulanto waqtiyo aadan awoodin inaad hesho daryeel la isku halleyn karo ama aad dhibaato kala kulanto helitaanka baahiyaha aasaasiga ah, kooxdayadu waxay kaa caawin karaan inay kugu xirmaan ilaha lagama maarmaanka ah. Waxaan hubineynaa inaysan carqalad ku imaanaynin daryeelka aad hesho ama daawooyinka laguu qoray ee aad qaadato. Waxaan kuu gudbin karnaa ilo dheeri ah si aad wax uga qabato baahiyahaaga caafimaad oo dhan. Kuwaas waxaa ka mid noqon kara:
Barnaamijka Dib u Eegista Bukaanka iyo Isuduwaha (PRC), ee loogu talagalay dadka isqoray ee buuxiya shuruudaha lagu cadeeyay WAC 182-501-0135
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Oktoobar 21, 2020